कसैलाई धोका दिदैनन यी चार राशिहुने मानिसले - visualnepal
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार सबै राशिको स्वभाव अलग-अलग हुन्छन् । केहि राशिका व्यक्तिहरु अति नै रिसाह हुन्छन् भने कुने राशिका मानिसहरु खुल्ला विचारका हुन्छन् । त्यस्तै कोहि राशि सबैभन्दा धोका दिने हुन्छन् भने कुनै राशि भएकाहरु चाँडै नै धनी हुने हुन्छन् ।१२ राशिमध्ये यी ४ राशिका व्यक्तिहरु अति नै विश्वासका पात्र हुन्छन् र भरोसा गर्न लायक हुन्छन् र सधैँ अरुको इज्जत समेत गर्छन् । जानी राखौ :
वृष राशिः यो राशिका व्यक्ति सधैँ आफ्नो प्रिय व्यक्तिहरुको समर्थन गर्छन् र तिनीहरुको विरुद्धमा कुनै पनि गलत कुरा सुन्न सक्दैनन् । यति मात्र नभएर यी राशिका व्यक्तिसँग विश्वास गर्न सकिन्छ ।कर्कट राशिः कर्कट राशिसँग मानिसहरु धेरैनै विश्वसनीय हुन्छन् । यी राशिका मानिसहरुलाई कहिले पनि अरुप्रति नराम्रो विचार आउँदैन । यसको साथै यी राशिका व्यक्तिले तपाईको बारेमा जे कुरा सुन्नेछन् तिनलाई आफैँभित्र राख्छन्, बाहिर भन्दै हिँड्दैनन् ।
तुला राशिः तुला राशि भएकाहरु सधैँ अरुको भावनाको कदर गर्छन् । यीनीहरु सधैँ आफ्नो साथीप्रति इमान्दार हुन्छन् र उनीहरूलाई हृदयबाट नै चाहन्छन् ।वृश्चिक राशिः वृश्चिक राशि भएकाहरु सधैँ अरु व्यक्तिसँग खुसी बाँड्ने गर्छन् । यीनीहरु सधैँ अरूलाई खुसी राख्न खोज्छन् र अरूको खुसीको लागि प्रयास गरिरहन्छन् ।
यसैगरी ७ वटा बार मध्ये कुन बार जन्मिएका मान्छे ले कति धन कमाउछन् ? कति सफल हुन्छन ? हेर्नुहोस आफ्नो भाग्यपरिक्षा!७ वटा बार मध्ये कुन बार जन्मिएका मान्छे ले कति धन कमाउछन् ? कति सफल हुन्छन ? हेर्नुहोस आफ्नो भाग्यपरिक्षा!आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ ।
ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् । जानी राखौ :आइतबारः पुरुष आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ । स्त्री आइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् ।
पटक हेरिएको 3,488